८ जिबी र्‍याम र १२८ जिबी स्टोरेज भएको रियलमी–८ बजारमा, मुल्य कति ? | दर्पण दैनिक
८ जिबी र्‍याम र १२८ जिबी स्टोरेज भएको रियलमी–८ बजारमा, मुल्य कति ?
प्रकाशित मिति: २०७८ जेष्ठ २५ गते १२:३५
काठमाडौं । चिनियाँ स्मार्टफोन ब्राण्ड रियलमीले रियलमी–८ सार्वजनिक गरेको छ । यो सिरिज कम्पनीको मध्यम श्रेणी अन्तर्गत पर्दछ। रियलमी–८ को मुख्य क्यामराको ६४ एमपीको छ। त्यस्तै, ८ एमपीको वाइड एङ्गगल, २ एमपी म्याक्रो र २ एमपी डेप्थ लेन्स दिइएको छ । फोनमा १६ एमपी सेल्फ क्यामरा छ। सेल्फी प्रोट्रेट क्यामेरामा एआई ब्युटि, प्रोट्रेट मोड र सुपर नाइटस्केप मोड छन्।
यसमा भएको दोहोरो दृश्य भिडियो फिचरले प्रयोगकर्ताका लागि रमाइलो र आकर्षक भिडियो लिन सहयोग गर्छ । फोनमा ६.४ इन्च सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिइएको छ। त्यस्तै, ५ हजार एमएएच ब्याट्रीका साथ ३० वाट फास्ट चार्ज सुविधा दिइएको छ ।
यसले ब्याट्रीलाई मात्र ६५ मिनेटमा पूर्ण रुपले चार्ज गर्न सघाउँछ । यसको ब्याट्री ४० दिन स्ट्यान्डवाइमा र निरन्तर खेल खेल्दा १० घण्टा सम्म टिक्ने कम्पनीले बताएको छ ।
यसमा रहेको सुपर पावर सेभिङ्ग मोडले ५ प्रतिशत मात्र रहँदा पनि २ दिनसम्म टिकाउन सक्छ। रियलमी–८ मा विभिन्न एप जस्तैः क्विक फ्रिज, स्लिप स्ट्यान्डवाइ अप्टिमाइजेसन र अन्य ब्याट्री अप्टिमाइजेसन फिचर्सहरु छन् । यो ८ जिबी र्‍याम र १२८ जिबी स्टोरेजमा उपलब्ध छ। यसको बजार मूल्य ३५ हजार ९ सय ९० छ।